Real Madrid oo go’aamisay qiimaha ay Marcelo kaga iibineyso kooxda Juventus – Gool FM
Real Madrid oo go’aamisay qiimaha ay Marcelo kaga iibineyso kooxda Juventus
Dajiye July 13, 2018
(Real Madrid) 13 Luulyo 2018. Difaaca kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Marcelo ayaa lala xiriirinayaa in saaxiibkiis hore ee Cristiano Ronaldo uu kula midoobi doono kooxda Juventus xili ciyaareedka cusub.
Sida ay baahisay saxaafada caalamka Marcelo ayaa ku war galiyay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez inuu ka tagayo Santiago Bernabeu hadii uu baxo Ronaldo.
Hadaba sida ay shaacisay saxaafada caasimada Madrid Real Madrid ayaa go’aamisay qiimaha ay Marcelo ugu ogolaaneyso in uu ugu dhaqaaqi karo kooxda reer Talyaani ee Juventus.
Los Blancos ayaa sheegtay in laacibka reer Brazil ay kaga fasixi doonto garoonka Santiago Bernabeu aduun dhan 50 million euros. Kadib markii ay kooxda Juventus xiiso balaaran ay ka muujisay saxiixiisa kadib marka ay la saxiixatay Cristiano Ronaldo.
Marcelo ayaa ah kabtanka labaad ee kooxda Real Madrid kadib Sergio Ramos, wuxuuna 30 jirkan yimid garoonka Santiago Bernabeu sanadii 2007.
Maxaa ka cusub heshiiska ay kooxda Barcelona ku dooneyso saxiixa N'Golo Kanté?
“Maamulka Everton ma aysan dooneynin in kooxda aan ku sii sugnaado”…. Wayne Rooney